China Mahery sy haingana tafo Welder Hot Air LST-WP1 orinasa sy ny mpamatsy | Lesite
Mahery sy haingana tafo Welder rivotra mafana LST-WP1
Mahery sy haingana welding hafainganana
Ny tafo vita amin'ny rivotra mafana welding machine WP1, izay mampiasa ny teknolojia avo lenta fanafanana rivotra, dia mora ny miasa, miorina tsara amin'ny fampisehoana, avo ny hery, ary manana isan-karazany ny indostria fampiharana. Afaka mahatsapa haingana ny orinasa indostrialy, toerana ho an'ny daholobe, tetikasa ambanin'ny tany, dobo filomanosana, sns. Fanamboarana sy lasantsy ny fonon-dranon'ny thermoplastic avo lenta toy ny PVC, TPO, EPDM, sns amin'ny sehatra maro.
Safidy voalohany ho an'ny welding tafo amin'ny faritra midadasika, miasa maharitra ary fampiasana mahomby kokoa.
WP1 BL nohavaozina miaraka amin'ny motera Brushless
Ny WP1 BL nohavaozina dia manome azy io fampisehoana avo lenta sy faharetana, miaraka amin'ny ankapobeny tsara lavitra noho ny vokatra azo ampitahaina.
Ny maotera tsy misy fikojakojana tsy misy fikojakojana tsy manolo ny borosy karbona, miaraka amin'ny a fiainana hatramin'ny 6000 ora.
Fanaraha-maso Mihidy Loop
Io milina io dia tsy vitan'ny hoe mampiseho ny welding mari-pana sy ny welding hafainganam-pandeha, ny rafitra fanaraha-maso manaiky mihidy loop fanaraha-maso, na inona na inona ny ivelany malefaka fiovana, na ambony na midina ny welding eo ambanin'ny toetry ny tontolo iainana ivelany fiovana, toy ny fanehoan-kevitra ratsy. manitsy ho azy ny mari-pana sy ny hafainganam-pandeha, ataovy ny welding masontsivana dia marin-toerana kokoa, azo antoka kokoa welding kalitao.
Nandray baiko kely
Hihaona amin'ny serivisy namboarina manokana
Ahitana 1pc fanampiny 230v/4000w fanafanana singa, 5 pcs fuses (ho an'ny circuit board),1pc anti-hot pad, 1pc borosy vy hanadio welding nozzle, 1pc vy fandidiana tantana, 1pc fanampiny counterweight, 1pc screwdrivers sy 4pcs wrenches, 1 pc anglisy Manual.
Ny milina dia mihidy amin'ny visy ao anaty kitapo metaly.
Mampiasà bubble plastika hametahana kojakoja toy ny kitapo kojakoja, tantana mba hisorohana ny fifandonana mandritra ny fitaterana.
Fampandehanana mora sy intuitive.
Mbola azo ampiasaina ara-dalàna ny 180-240V an-tsaha.
Ny mari-pana sy ny hafainganam-pandehan'ny fanaraha-maso mihidy miaraka amin'ny fahatsiarovan'ny parameter sy ny fiasan'ny fanairana
Efficient Welding Nozzle
Ny famolavolana fiarovana manohitra ny mari-pana miaraka amin'ny fampitomboana ny haavon'ny hafanana sy ny haavon'ny rivotra dia miantoka ny kalitaon'ny welding ary manatsara ny fahombiazan'ny fanorenana.
Fehikibo mandroso mitambatra miaraka amin'ny rafi-pamokarana tsindry
Ny fehikibo sy ny fanerena rollers dia tsotra sy mety hosoloina, ny fanerena dia voalanjalanja ary ny fandehanana dia miorina tsara, izay afaka manafoana tsara ny fisehoan-javatra mibontsina ary miantoka ny fanamiana sy azo antoka welding seam
Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny kodiaran'ny fitarihana, dia miantoka ny mandeha mahitsy ny welder tsy misy fiviliana.
teo aloha: Banner welder LST-UME
Manaraka: Bitumen Hot Air Welder LST-WP2
MODELY LST-WP1 LST-WP1
Zintin'aratra 230V 230V
fahefana 4200W 4200W
hafanana 50~620 ℃ 50~620 ℃
Hafainganam-pandrefesana 1-10m/min 1-10m/min
Dimensions (lava × sakany × haavony) 555x358x304mm 555x358x304mm
Lanja afa-karatsaka 38 kg 38 kg
Haben'ny rivotra Tsy azo amboarina 70-100% Adjustable tsy manam-petra
Certification AK AK
Garantie 1 taona 1 taona
Fandrefesana haingana sy mahomby amin'ny TPO
Hot Air Welder Tafo
Kitapo plastika welder
Plastic Welder Hot Air Gun
Flexible sy fampiharana maro tafo Weldi...